सीमा अतिक्रमणबारे डा. महतको खुलासा : बरु ढुंगो बोल्ला तर ओली सरकार बोल्दैन !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चीन र भारतसँगको सीमा विवाद कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कमजोरीका कारण चर्किएको बताएका छन् ।
मंगलवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने, ‘जहाँसम्म हाम्रा छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धको विषय छ, यो अत्यन्तै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण छ । हामीले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर वर्तमान सरकारले गर्न नसकेको कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । उहाँहरू कामभन्दा बढी कुरा गर्नुहुन्छ । काम गर्नुहुन्न । जहाँ कुरा राख्नुपर्ने हो, त्यहाँ राख्नुहुन्न । बाहिर चाहिँ त्यसबारे बढाइचढाइँ गर्नुहुन्छ । त्यसले गर्दा यो सम्बन्धहरूमा अहिले जटिलता थपिएका छन् ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले कालापानी, महाकालीको विषय पूरानो भएको बताए । ‘नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा, सुशील कोइरालाजीले पनि र शेरबहादुर देउवाजीले पनि जहाँनिर यो विषय उठाउनुपर्ने थियो, यो उठाउनु भएकै हो । म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा हामीले द्विपक्षीय सीमा संयन्त्र बनायौं, यसले चाँडोभन्दा चाँडो सीमा विवादको समस्या हल गर्ने कुरा टुंगो लगाउने सहमति भएको हो । त्योअनुसार यो संयन्त्रले काम पनि अघि बढाएको हो,’ उनले भने ।
महतले वर्तमान सरकार बहुमतको सरकार रहेको बताउँदै सत्तामा नहुँदा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेताहरूले राष्ट्रियता ‘हाम्रै काँधमा उभिएको छ’झैं गरी कुरा गरेको टिप्पणी गरे । ‘तर सत्तामा आएपछि उहाँहरूले यी विषय उठाएको हामीले पाएका छैनौं । सत्तामा आएपछि द्विपक्षीय पटक–पटक बैठकहरू भए, भेटवार्ता भए, कहीँकतै यी विषय उठाएको हामीले पाएनौं । यो सरकार हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ र अखण्डताप्रति गम्भीर नभएको स्पष्ट नै छ,’ उनले भने ।
उनले नेपालको जमिन चीनले पनि अतिक्रमण गरेको भन्ने कुरा पत्रपत्रिकामा आएको उल्लेख गर्दै अगाडि थपे, ‘चिनियाँ सरकारको जहाँसम्म सवाल छ, अहिले पत्रपत्रिकामा धेरै ठाउँमा अतिक्रमण भयो भन्ने छ, त्यहीँ महाकालीको सम्बन्धमा पनि भारतसँग सम्झौता गरेको अवस्था छ, यस विषयमा पनि सरकार पटक्कै बोल्दैन । बरु ढुंगो बोल्ला तर सरकार बोल्दैन । त्यसकारण हामी के भन्छौं भने भारतसँग पनि यो महाकाली लिपुलेकको सम्बन्धमा चाँडोभन्दा चाँडो कुटनीतिक तहमा उच्चस्तरीय वार्तामार्फत तथ्य, तथ्यांक र आधारसहित नेपाल सरकार प्रस्तुत हुनुपर्छ ।’
नेता महतले नेपाल र चीनको सीमा विवादको सवालमा पनि सरकारले सत्य, तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘नेपाल र चीनको सीमा छ, त्यहाँ पनि धेरै ठाउँमा अतिक्रमण भएको छ भन्ने कुरा पत्रपत्रिकामा आएको छ । हामीलाई थाहा छैन । चिनियाँ सरकारले होइन भनिरहेको छ । यो विषयमा पनि छानबिन गरी सरकारले सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । अतिक्रमण भएको छ भने त्यो विषयमा चिनियाँ सरकारसँग कुरा उठाउनुपर्छ । तर वर्तमान सरकार गम्भीर छैन । गम्भीरताका साथ यी कुराहरू सम्बन्धित ठाउँमा नउठाउनाले यी जटिलताहरू थपिरहेको हामीले महसूस गरिराखेका छौं । यो जमिन नेपालकै रहनुपर्छ । तथ्य र प्रमाणले पनि यही भन्छ ।’
महतले मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनले वर्तमान सरकारलाई सशक्त सन्देश दिने बताएका छन् । ‘यो सरकार गठन भएको झण्डै दुई वर्ष भयो, यो अवधिमा सरकारलाई जनताले हेरेका छन् । सरकारमा बस्ने पार्टीका नेताहरूले जनतालाई जुन आश्वासन दिएका थिए । जुन सपना कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले बाँडेका थिए, ती कुनै पनि पूरा भएनन् । जनता अहिले निराश छन्,’ उनले भने ।
मुलुकमा यतिबेला मूल्यवृद्धि संस्थागत भइरहेको उनले बताए । कर बढिरहेको र आस्थाका आधारमा सेवासुविधामा भेदभाव भइरहेको पनि उनको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘जनताका पीरमर्काप्रति सरकार पूरै उदासिन छ । राज्य संयन्त्र, संवैधानिक निकायलाई र पुलिस प्रशासनलाई सरकारले आफ्नो छायाँमा राख्ने कोसिस गरिरहेको छ । त्यति मात्रै होइन, यहीँ उपनिर्वाचनमा पनि निर्वाचन घोषणा भएर आचारसंहिता लागू भइसकेपछि पनि आफू अनुरुप काम गराउनको लागि सरुवा–बढुवादेखि ठूलो चलखेल भइरहेको छ । जुनसुकै मूल्यमा पनि चुनाव जित्नुपर्छ सरकारले साम, दाम, दण्डभेद प्रयोग गर्ने मनसायमा छ ।’
सरकार पक्षका उम्मेदवारलाई पराजित गर्नुपर्छ भन्ने जनभावना आफूहरूले पाएको उनको दाबी छ । ‘यो उपनिर्वाचनको परिणाम हाम्रो पक्षमा आउँछ । वडा सदस्यदेखि केन्द्रीय निर्वाचन पोखरासम्म नेपाली कांग्रेसको पक्षमा ठूलो उत्साह छ । समर्थन छ । हामी सबै एकतावद्ध भएर लागेका छौं । तर यो सरकार हुने हदसम्म धाँधली गरेर भएपनि आफ्नो पक्षमा परिणाम ल्याउने कोसिसमा छ । सञ्चारकर्मीहरूले खबरदारी गर्नुपर्छ । यो निर्वाचनमा परिवर्तनको पक्षमा परीणाम आउँदा सरकारलाई सशक्त सन्देश जान्छ ।’
महतले वर्तमान सरकार पूरै असफल भएको दाबी गरेका छन् । ‘यो हामीले भनिरहेको होइन, आमजनता सबै निराश छन् । जनताको कुरा छोडौं, कम्युनिस्ट पार्टीकै स्थानीय तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नै असन्तुष्ट छन् । उहाँहरू यहीँ उपनिर्वाचनको क्रममा नेपाली कांग्रेसको पक्षमा र समर्थनमा उत्रिनुभएको छ । सबै मोर्चामा यो सरकार असफल छ । भ्रष्टाचार संस्थागत भइरहेको छ । राजस्वको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । सरकारले आफैं उपभोक्ता समिति बनाउने अनि आफ्नो मान्छेमार्फत बजेट प्रवाह गर्ने काम भइरहेको छ । समग्र रुपमा सरकार ठीक बाटोमा छैन । परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि सरकारको विश्वसनीयता एकदमै कमजोर भइरहेको छ । लगानी आउन सकेको छैन् । हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूदेखि अरु राष्ट्रहरूसँग हामीले हाम्रो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्ध विकसित गर्न सकेका छैनौं ।’